Soo dejisan Auslogics Registry Cleaner 8.5 – Vessoft
WindowsNidaamkaNadiifinta & WaxyeelayntaAuslogics Registry Cleaner
Bogga rasmiga ah: Auslogics Registry Cleaner
Diiwaanka Auslogics Coobbi – fudud ah si ay u isticmaalaan utility si aad u nadiifiso habka iyo hagaajin khaladaad diiwaanka. Software uu baaritaanku nidaamka si ay u aqoonsadaan faylasha loo baahnayn iyo hagaajin khaladaad diiwaanka. Diiwaanka Auslogics Coobbi ku jira module ah inuu ka soo kabsado xogta hore loo tirtiray ka diiwaanka. Software wuxuu kuu ogolaanayaa inaad doorato nooca scan iyo u arkaan dhammaan dhibaatooyinka ka helay suuqa kala of view faahfaahsan. Diiwaanka Auslogics Coobbi ayaa interface ah dareen iyo fududahay in la isticmaalo.
Rajeenayo in khaladaad diiwaanka
Takhalusid faylasha loo baahnayn
Kordhinta nidaamka waxqabadka qalliinka
Soo dejisan Auslogics Registry Cleaner
Faallo ku saabsan Auslogics Registry Cleaner
Auslogics Registry Cleaner Xirfadaha la xiriira